ချန်​နယ်​9က လာတဲ့ The King's Speech ကို ခုနကပဲ ကြည့်​ပြီးသွားတယ်​။ အဲဒီဇာတ်​ကား ထွက်​ကတည်းက အ​ခေါက်​​ခေါက်​ ကြည့်​ခဲ့ဖူးပါတယ်​။ ကြိုက်​လို့ အ​ခွေ ကူးထားသလို ကိုယ့် ကျောင်းသား​တွေကိုလည်း အတုယူဖို့ရာ ခဏခဏ ပြခဲ့ဖူးတယ်​။
​တော်​​တော်​များများလည်း ဒီဇာတ်​ကား ကြည့်​ဖူးကြမယ်​ ထင်​ပါတယ်​။ ဗြိတိန်​က အခုလက်​ရှိ အဲလစ်​ဇဘက်​ ဘုရင်​မကြီးရဲ့ ခမည်း​တော်​ ဆဋ္ဌမ​မြောက်​ ​ဂျော့ဘုရင်​ရဲ့ တကယ့်​ အဖြစ်​အပျက်​ကို အ​ခြေခံပြီး ရိုက်​ထားတာပါ။ အစ်​ကိုဖြစ်​သူ အက်​ဒွပ်​ ဘုရင်​ နန်းစွန့်​ပြီး​နောက်​ စကားထစ်​တဲ့ ​ဂျော့ဘုရင်​ ​လောင်းလျာက ဘုရင်​အဖြစ်​ တိုင်းပြည်​ကို မိန့်​ခွန်း​ပြောနိုင်​ဖို့ ကြိုးစား ​လေ့ကျင့်​ရတဲ့ ဇာတ်​လမ်း ဆိုပါ​တော့။
သူဟာ ​ရေဒီယိုက​နေပြီး တိုင်းပြည်​ကို အ​ရေးကြီးတဲ့ မိန့်​ခွန်း​ အသံလွှင့်​ဖို့အတွက်​ ​နောက်​ဆုံးအချိန်​ထိ အဆင်​သင့်​မဖြစ်​​သေးဘူး။ စကား​ပြောခွက်​​ရှေ့မှာ အင်​မတန်​ စိတ်​လှုပ်​ရှား​နေခဲ့တယ်​။ သူ မိန့်​ခွန်း​ပြောတဲ့ တ​လျှောက်​ သူ့ကို ​လေ့ကျင့်​​ပေးတဲ့ ​ဆရာက သူ့​ရှေ့မှာ ရပ်​​နေပြီး အသံတိတ်​ ညွှန်​ကြား​နေရတယ်​။ ​နောက်​ဆုံး​တော့ ​အနည်းငယ်​ အထစ်​အ​ငေါ့​လေးနဲ့ အောင်​မြင်​စွာ ​ပြောနိုင်​ခဲ့လို့ အားလုံးက သြဘာ​ပေးကြ​လေတယ်​။
​ပြောချင်​တာက ​ဂျော့ဘုရင်​ အ​ကြောင်းမဟုတ်​ပါဘူး။ အဲဒီဇာတ်​ကား ကြည့်​ပြီးတဲ့အခါ ၂၁ ရက်​​နေ့က ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​ စင်​ကာပူမှာ ​စကားပြောခဲ့တာကို သတိရလိုက်​မိတယ်​။
အများသူငါ​ရှေ့မှာ စကား​ပြောရတဲ့ အတတ်​ပညာဟာ ဘယ်​​လောက်​ ခက်​ခဲတယ်​ ဆိုတာ ​ပြောဖူးသူတိုင်း နားလည်​ကြမှာပါ။ အင်္ဂလိပ်​လို မွှတ်​​နေ​အောင်​ ​ပြောတတ်​တိုင်း အများ​ရှေ့​မှောက်​ ​ပြောနိုင်​ဖို့ရာ မလွယ်​ကူပါဘူး။ အများ​ရှေ့​မှောက်​ဆိုတာကလည်း သူလိုကိုယ်​လို အရပ်​သား​တွေ ​ရှေ့​မှောက်​ မဟုတ်​ပါဘူး။ သူတို့နိုင်​ငံက အကြီးအကဲ​တွေ၊ နိုင်​ငံတကာက ​ခေါင်း​ဆောင်​​တွေ၊ ပညာရှင်​​တွေ အသီးသီးရဲ့ ​ရှေ့​မှောက်​မှာ ​ပြောရတာပါ။
အဲဒီလို ​ပြောတဲ့အခါ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကိုယ်​ ယုံကြည်​မှု အပြည့်​နဲ့ အများ စိတ်​ဝင်​စား​အောင်​ ​ပြောနိုင်​တယ်​၊ ဟာသဉာဏ်​ တင်္ခဏုပ္ပတ္တိဉာဏ်​ ရှိတယ်​။ အချက်​အလက်​ အလို့ငှာ တခါတရံ စာရွက်​ကြည့်​ရ​ပေမဲ့ အလွတ်​ကျက်​ပြီး ​ပြောတာ မဟုတ်​ဘူး၊ နား​ထောင်​တဲ့ ပရိသတ်​ကိုလည်း ​လေးစားမှု ရှိတယ်​၊ မလိုအပ်​ဘဲ ရှည်​လျား ​ထွေပြား ​ပြောမ​နေဘဲ ကိုယ်​ ​ပြောလိုတဲ့ အချက်​အလက်​ကို တိကျစွာ ​ပြောနိုင်​တယ်​၊ ပရိသတ်​က ​မေးခွန်းထုတ်​ရာမှာလည်း ကျေနပ်​​လောက်​တဲ့ အ​ဖြေကို မဆိုင်းမတွ ပြန်​​ဖြေ​ပေးနိုင်​ခဲ့တယ်​... စတဲ့ public speaker တ​ယောက်​ရဲ့ အရည်​အချင်း ​ဒေါ်စုမှာ အပြည့်​အဝ ရှိပါတယ်​။
နိုင်​ငံတကာမှာ သွား​ပြောတဲ့ ​ဒေါ်စုရဲ့ မိန့်​ခွန်း​တွေ လက်​ချာ​တွေကို နား​ထောင်​ရတိုင်း ​သြော်​ ​ဒေါ်စုတ​ယောက်​ ရှိခြင်းဟာ ကိုယ့်​တိုင်းပြည်​အတွက်​ အရ​တော်​​ပေစွ လို့ ​ကျေနပ်​စွာ ​ရေရွတ်​ရတာ အခါခါ။
အင်္ဂလိပ်​စာမွှတ်​​နေ​အောင်​ ​ပြောနိုင်​တိုင်း ပညာတတ်​ မဟုတ်​ဘူး ... အ​ပြော​ကောင်း သလို အလုပ်​လည်း ​ကောင်းပါ​စေ ဆိုတဲ့ မှတ်​ချက်​မျိုး​တွေ မြင်​ရ​တော့ စိတ်​မ​ကောင်း ဖြစ်​ရတယ်​။ နှစ်​​ပေါင်းများစွာ မ​ပြောရဲ မဆိုရဲဘဝ၊ နိုင်​ငံတကာ အလယ်​ အူလည်​လည်​ ဖြစ်​ခဲ့ရတဲ့ ဘဝကို ​မေ့သွားလို့ပဲလား ပြန်​များ လိုချင်​ကြသလားရယ်​လို့ ​တွေးမိပါတယ်​။
​ဒေါ်စုက​တော့ ​ပြောစရာရှိတာ ​ပြောသွားမှာပါပဲ။ စကား​ပြောရမယ့်​ တာဝန်​က သူ့တာဝန်​ကိုး။ သူမ​ပြောရင်​ ဘယ်​သူက သူ့လို ​ပြောနိုင်​မှာမို့လဲ​လေ။ လိုက်​လုပ်​ရမှာက ကိုယ်​​တွေပဲ။ သူ​ပြောသွားသလို ​နောက်​က လိုက်​လုပ်​ကြရမှာ။ သူ့တာဝန်​ သူယူသလို ကိုယ့်​တာဝန်​ ကိုယ်​ယူကြရမှာ​။
လူ သန်း​ခြောက်​ဆယ်​ဟာ သူ့ဆီကသာ အများကြီး ​မျှော်​လင့်​​နေကြတယ်​ ဆိုတာ တကယ်​​တော့ မတရားပါဘူး။ တဘဝလုံး ​ပေးဆပ်​ခဲ့ရတဲ့ သူက လူ သန်း​ခြောက်​ဆယ်​ဆီကသာ ​ပြန်​မျှော်​လင့်​သင့်​တာ။ ကိုယ်​​တွေက သူ့ကို ပြန်​​ပေးဆပ်​သင့်​တာ၊ ပြန်​ကူညီသင့်​တာ။ စကားလုံး​တွေနဲ့ တိုက်​ခိုက်​တာ​တွေ ​လျှော့ပြီး ဒီအသက်​အရွယ်​မှာ သူ့ တကိုယ်​စာ​လေးနဲ့ တိုင်းပြည်​ကိုယ်​စား ဒီ​လောက်​ လုပ်​​ပေး​နေတာကိုပဲ ​ကျေနပ်​ရမှာပါ။
နာရီပြန်​ ၂ ချက်​ ​ကျော်​ပါပြီ။ ကျွန်​မ အိပ်​မ​ပျော်​ပါဘူး။
The King's Speech ဇာတ်​ကားထဲမှာ ​​ဂျော့ဘုရင်​ဟာ သူများ​ရေး​ပေးတဲ့ မိန့်​ခွန်းကို အထစ်​အ​ငေါ့​လေး​တွေနဲ့ အများ​ရှေ့​မှောက်​မဟုတ်​ဘဲ ​ရေဒီယိုက တဆင့်​ ​ပြောသွားတာကို တနိုင်​ငံလုံး တ​လေးတစား နား​ထောင်​​နေတဲ့ ဇာတ်​ဝင်​ခန်း​လေး ပြန်​မြင်​​ယောင်​ပြီး စိတ်​မ​ကောင်း ဖြစ်​​နေမိလို့ပါ။
Posted by မေဓာဝီ at 5:41 AM0comments
Labels: အက်ဆေး, ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
မနက် အိပ်ရာကနိုးတော့ ဦးစွာ ထိုသို့ ရေရွတ်မိ၏။ မျက်နှာသစ် ကိုယ်လက် သန့်စင် အဝတ်အစားလဲပြီး အိမ်တံခါး သော့ပိတ်၍ ထွက်ခဲ့သည်။ ရွှေတိဂုံဘုရားဆီ .. ။
မြောက်ဘက်မုခ် သွေးဆေးကန်မှာ ဗိုက်ဆာနေကြရှာမည့် ငါးတွေကို မနက်စာ ပေါင်မုန့် ကျွေးသည်။ ရာသီဥတုက မိုးမရွာ နေမပူ၊ နေလို့ ကောင်းရုံ တိမ်ညိုအုံ့ဆိုင်း ခပ်မှိုင်းမှိုင်းကလေး။ ငါးစာကျွေးပြီး မြောက်ဘက်မုခ် လှေခါးမှ တထစ်ချင်း ဖြည်းဖြည်းနင်း၍ မေတ္တာပွါးရင်း တက်ခဲ့သည်။ ခါတိုင်းလို ဓာတ်လှေခါး မစီးတော့။ ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ် ရောက်ခါနီး ပန်းဆိုင်မှာ ပန်းဝယ်ပြီး ရင်ပြင်တော်ကို လက်ျာရစ် ပတ်သည်။
ဘုရားပန်းမရှိသော စောင်းတန်းတခုမှ ရုပ်ပွါးတော်များ ရှေ့တွင် ဝယ်လာသော ကြာပန်း ကပ်လှူ၍ သီလယူ ဘုရားရှိခိုးပြီး နာရီကြည့်လိုက်တော့ ၇ နာရီ ခွဲလုပြီ။ ညက ခင်ပွန်းဖြစ်သူ တင်ထားသော မွေးနေ့ဆုတောင်းပို့စ်၏ ကွန်မန့်တွင် ဆုတောင်းပေးကြသူများနှင့် မက်ဆန်ဂျာမှ တဆင့် ဆုတောင်းပေး ကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးစကား ပြန်လည်ဆိုပြီး အဝေးရောက် မိဘများထံ ဖုန်းလှမ်း​ခေါ်လိုက်သည်။
၇ နာရီ ခွဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်များစွာ ဒီလိုအချိန်မှာ အမေနာကျင်နေမလား … ဟု သူတွေးမိသည်။ သေချာတာကတော့ နာကျင်ခြင်းနှင့် မျက်ရည်တွေ ရောယှက်ကာ သူ့ကို လူ့လောကကြီးထဲ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမည်။ ကလေးတယောက် မွေးဖွားခြင်းသည် ဘယ်မိခင် အတွက်များ လွယ်ကူနေမှာမို့လဲ။ အမေသည် ထိုသို့ မလွယ်ကူသည့် ကြားက တတိယမြောက် သမီးတယောက် ဖွားမြင်ခဲ့ပါသည်။
“အမေ … ကြားရလား … အမေ ဒီအချိန် သမီးကို မွေးတာနော် ဟုတ်တယ်မို့လား”
“အခု မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်အချိန်လဲ သမီး”
“ခုနစ်နာရီ ခွဲပြီ အမေ”
“အေး … ဟုတ်တယ် ဒီအချိန် သမီးကို မွေးတာ၊ အဖေကြီး သမီးနဲ့ လာပြောလိုက်ပါဦး”
“သမီး အခု ဘုရားရောက်နေတာ … ဘုရားလည်း ရှိခိုးပြီးပြီ၊ အဖေနဲ့ အမေကို အဝေးကနေ ကန်တော့ လိုက်ပါတယ်”
နည်းနည်းတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း ဆန်နေမလား မသိ။ တကယ်ပင် ထိုသို့ သူ ပြောခဲ့ပါသည်။ အမေ နှင့် အဖေက ဝမ်းမြောက်စွာ သာဓုခေါ်ကြပြီး ဆုတွေ အများကြီး ပေးသည်။ အဖေက ထုံးစံအတိုင်း ဆုအားလုံး၏ နောက်ဆုံးမှာ သမီးလေး ပျော်ပါစေ … ဟု အဆုံးသတ်ခဲ့၏။ အ​ဖေ ပေးတဲ့ ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ … ဟု ရှေ့တည့်တည့်မှ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးကို ကြည့်ရင်း ပြန်လည်ပြောခဲ့သည်။ လွမ်းတယ် အဖေနဲ့ အမေ … ။ (ဒီနေရာ ရေးနေရင်း မျက်ရည်ဝဲရသည်)
မွေးနံထောင့်ရှိ ဆင်းတုတော်နှင့် ဂြိုလ်တိုင်တွင် ရေသပ္ပါယ်လေ့ သိပ်မရှိပေမဲ့ “အေးချမ်းအောင် ရေသပ္ပါယ် ခဲ့ပါသမီး” ဟု အဖေပြောသည့်အတိုင်း ရေသပ္ပါယ်ခဲ့သည်။ အောင်မြေမှနေ၍ ​ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီးကို အပြည့်အဝ ဖူးမြော်ကြည်ညို ပြီးသည့်နောက် မြောက်ဘက်မုခ် လှေခါးမှပင် ပြန်ဆင်းခဲ့သည်။
“မေ ကြိုက်တဲ့ မနက်စာ သွားစားနော်” ခင်ပွန်းသည် မှာသည့်စကားကြောင့် သူ့ကိုယ်သူ treat လုပ်ရန် အငှားကားလေးကို ကန်တော်ကြီးထဲရှိ Signature သို့ မောင်းခိုင်းလိုက်သည်။ ထုံးစံမပျက် သူမှာသည်ကား ဆိတ်စွပ်နှင့်ပလာတာ၊ ကြက်ခြေထောက် ငရုတ်ကောင်း ဒင်ဆမ်း၊ ကော်ဖီတခွက် ရေနွေးကြမ်း တအိုး ကုန်သောအခါ ဆိုင်မှ ထွက်၍ နောက်တနေရာဆီသို့။
ချက်ပြုတ်ရန် ဟင်းလျာများနှင့် ဘုရားပန်းဝယ်ပြီး ဆိုက်ကားကြီးစီး၍ အိမ်ပြန်ခဲ့သည်။ သားငါးကိုင် ဆေးကြော သိမ်းဆည်း၊ သောက်တော်ရေနှင့် ဘုရားပန်းကပ် … အားလုံးပြီးသော် မောပြီ။ ခဏနားပြီး ခင်ပွန်းသည်နှင့် စကားပြော … ကွန်မန့်လေးတွေ ပြန်။
နေ့လည် ၁ နာရီခွဲသာသာမှာတော့ အမေစုရဲ့ lecture ကို နားထောင်သည်။ အမေ့ လက်ချာကတော့ သူ့မွေးနေ့ အတွက် အဖိုးအတန်ဆုံး လက်ဆောင်ပမာပါပဲ။ 21 August ဟု ​​နေ့စွဲ​ ရေးထိုးထားသည့်​ ​နောက်​ခံ​ရှေ့တွင်​ စကား​ပြော​နေသည့်​ အ​မေစုပုံရိပ်​က ကြည့်​မဝ ရှုမဝ။ သူ့​မွေး​နေ့သည်​ သမိုင်းဝင်​မည့်​ ​နေ့တ​နေ့ ဖြစ်​ခဲ့ပြီ။
မိသားစုနှင့် အဝေးမှာ … ခင်ပွန်းသည်နှင့် အဝေးမှာ … တယောက်တည်း ရှိနေခဲ့ရပေမဲ့ ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာ၊ မက်ဆန်ဂျာနှင့် ဗိုင်ဘာက ဆုတောင်းစကားများကြောင့် အထီးကျန် ဖြစ်မနေခဲ့။
မွေးနေ့ဆုတောင်း ကွန်မန့်တွေ၊ မက်ဆေ့ခ်ျတွေက ဝင်လာမစဲ တသဲသဲ။ (အဟဲ)
မွေးနေ့တွင် ဆုတောင်းပေးတာကို နှစ်သက်သော်လည်း တကယ်က အင်မတန် အားနာလှပါသည်။ သို့သော် …
မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ဆရာသမားတို့က … ခင်ပွန်းသည် တင်သည့် မွေးနေ့အမှတ်တရ ပို့စ်တွင် မွေးနေ့ဆုတောင်း ပေးကြသလို တိုင်းမ်လိုင်းတွင် ပို့စ်တင်၍လည်း ဆုတောင်း ပေးကြသည်။ ဒါ့ပြင် ပရိုဖိုင်းမှာ ငယ်ငယ်က ပုံလေး ပြောင်းလိုက်သည့် အခါတွင်လည်းကောင်း၊ အငြိမ်မနေနိုင်သေး၍ လွန်ခဲ့သည့် ၄ နှစ်က ကိတ်မုန့်တွင် ဖယောင်းတိုင် ထွန်းနေသည့် ဓာတ်ပုံလေးကို ပြန်ရှယ် လိုက်မိ ရာတွင်လည်းကောင်း မိတ်​​ဆွေအ​ပေါင်းက ဆုတွေ​တောင်း ကြရပြန်လေသည်။
တာဝန်ကျေသော မိတ်ဆွေများကို အလွန်ပင် အားတုံ့အားနာ ဖြစ်ရပါသည်။ မကြာမီ အချိန်ပိုင်းတွင် ဒီကနေ့ တနေ့တာ ကုန်ဆုံးပါတော့မည်။ ယခု ဒီစာသည် ကျင်လည်ခဲ့သော မွေးနေ့တနေ့တာကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် ဆုတောင်းစကား ဆိုသူ like သူ love သူ wow သူ … သူ … သူ … ထိုထိုသူ မှန်သမျှ အပါအဝင်​... ကျေးဇူးရှိခဲ့ဖူးသူ မှန်သမျှအား ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ပြောလိုခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင် အားနာစွာဖြင့်
မေနန္ဒာ (a) ​မေဓာဝီ
၂၁ သြဂုတ်​ ၂၀၁၈
Posted by မေဓာဝီ at 4:20 AM 1 comments
​မှောင်​ချိန်​မှာ အလင်း​ပွင့်​​တွေ လန်းဖြာ
​နေသာ​ရင်​ တိတ်​တိတ်​က​လေး အ်ိပ်​
နံရံထက်​က သူ့ရဲ့ဘဝ ... ။
​ခုတ​လော မီးအိမ်​​ပုံလေး​တွေ ​ရေး​နေမိတယ်​။ ဟို​နေ့က ​ရေးဖြစ်​တာ ငယ်​ငယ်​က သုံးခဲ့ဖူးတဲ့ ​ရေနံဆီ မီးအိမ်​​လေး၊ အခုက​တော့ နံရံထက်​က မီးအိမ်​​လေး။ ​လေ့ကျင့်​တဲ့အ​နေနဲ့ ရှိပြီးသား မူရင်းပုံ​တွေကို ကူး​ရေးတာပါ။ ​တူတာ မတူတာ အပထား နောက်​ထပ်​လည်း မီးအိမ်​​လေး​တွေ ထပ်​ရှာပြီး​ ရေးအုံးမယ်​။ လင်း​နေချိန်​မှာ အသုံးမဝင်​​ပေမဲ့ ​အမှောင်​ထဲမှာ အသုံးဝင်​တဲ့ မီးအိမ်​က​လေး​တွေကို အားကျ​နေမိလုိ့။
Posted by မေဓာဝီ at 4:29 AM0comments
ဘိုးတံ​​​လေး အ​ဝေး​ရောက်​​နေတဲ့အခါ ...
လွမ်း​ ... လွမ်း ... နေရသတဲ့ ... ။
Posted by မေဓာဝီ at 4:37 AM0comments
ဖြန့်​ခင်းလို့​ပေး ... ။ ။
Posted by မေဓာဝီ at 4:44 AM4comments
Posted by မေဓာဝီ at 4:50 AM0comments
ညိုရုံ ညိုခဲ့တာ ... ။
Posted by မေဓာဝီ at 5:00 AM0comments
နံနက်ခင်းဟာ ပန်းလေးတပွင့်ဆိုရင် ...
ကံ့ကော်ပန်းကလေး ဖြစ်စေချင် ... ။
Posted by မေဓာဝီ at 4:00 PM0comments
ငါးတန်းရောက်မှ အေဘီစီဒီ စသင်ပြီး
စီအေတီ ကတ်၊ အာအေတီ ရတ်
ဆပ်ပြာဆို ကာဘော်လစ် ရွှေဝါ
စီးကရက်ဆို ဒူးယားနဲ့ ခပေါင်း
ပိတ်စက တက်ထရွန် ပေါ်ပလင်
ကလေးအနှီး နို့မှုန့်ပါ ကိုတာနဲ့ဝယ်ရတဲ့ခေတ်။
ငစိန် ငကျွဲနဲ့ ဧည့်မထ
စပါးလုံး စက်ချေးခဲတွေ နိုင်းချင်း
တိုင်းပြည် ချောက်ကျတဲ့ ခေတ်
သမိုင်းတွေ ဖျောက်ကြတဲ့ ခေတ်
အရိုင်းတွေ ကြောက်ရတဲ့ ခေတ်
ခေတ် … ခေတ် … ခေတ်
ကျွန်တော်တို့ ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ ခေတ်။
Posted by မေဓာဝီ at 4:12 PM0comments
Posted by မေဓာဝီ at 2:34 AM0comments
Labels: ကဗျာ, ပန်းချီ, အမှတ်တရ
ငါနဲ့ မ​ခေါ်ရင်​ ငါ့အရုပ်​ပြန်​​ပေး -
နင့်​ကိုမ​ခေါ်ဘူး နင့်​အရုပ် ပြန်​ယူ - ဆိုတာ ...
လူကြီး​နေရာ ဆိုတာ ...
ပါဝါကြီးတိုင်း ဖြစ်​ပါ့မလား ...
နှလုံးသားလည်း ကြီးဦးမှ​လေကွယ်​ ... ။
အားလုံးကို အပြုံးနဲ့သာ ရင်​ဆိုင်​ချင်​မိတယ်​။
Posted by မေဓာဝီ at 4:24 PM0comments
Posted by မေဓာဝီ at 2:52 AM0comments
မိုးက အငြိုးနဲ့ ရွာတယ်၊
စံပယ်လေးတွေက ဆေးဆိုးခံကြရ ... ။
လက်ကျန်မာနတွေ ခြွေခြွေချလို့ ... ။
လောကဓံဆိုတာ အဆိုးချည်းမှ မဟုတ်တာ
လာဘော ယသော ... ဆို သဘောတွေကို ကျလို့ပဲ။
ဘဝတွင်းနက်ထဲက တက်ရခက်နေဆဲ ... ။
ပရိတ် ပဋ္ဌာန်းတွေနဲ့ ခြုံလွှမ်းရင် လုံစတမ်းလား
၂၆၊ ဇွန်၊ ၂၀၁၈
Posted by မေဓာဝီ at 5:04 PM 1 comments
မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ (သို့မဟုတ်) သစ္စာတရားနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တို့ရဲ့ ခေါ်သံ
ရုံတွေမှာ သွားမကြည့်တာ အနှစ် ၂၀ ကျော်ခဲ့ပြီ။ Myanmar movie revolution ရဲ့ အစလို့ ဆိုရမယ့် ဥပါယ်တံမျဉ်တုန်းက မကြည့်လိုက်ရလို့ မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ မှာတော့ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ချစ်ခင်ရတဲ့ ညီမတယောက်ကို အတင်းဆွဲခေါ်ပြီး သွားကြည့်ကြတယ်။ သွားမကြည့်ခင် trailer ကြည့်တာက လွဲလို့ ဘယ် ရီဗျူးမှ မဖတ်သွားပါဘူး။ တချို့ရီဗျူးတွေက ဇာတ်လမ်းတွေပါ ထည့်ရေးတော့ ကြည့်ရတာ အရသာပျက်​လို့ပါ။ အခုရေးမှာလည်း ဇာတ်လမ်းတွေ အများကြီး ထည့်မရေးပါဘူး စိတ်ချ။
တနင်္ဂနွေကြည့်ဖို့အတွက် သောကြာနေ့ကတည်းက ကြိုတင် ဘွတ်ကင်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ Junction Square ကို ဘွတ်ကင်လုပ်ရမယ့် တခုတည်းသော ဖုန်းနံပါတ်ကို ဆယ့်ငါးကြိမ်ထက် မနည်း ဆက်တိုက်ခေါ်မှ ရသွားတယ်။ ဒါတောင် ဘေးခုံတွေပဲ ကျန်တော့တယ် …. အလယ်ခုံဆိုရင် အပေါ်ဆုံးတန်း couple seat ပဲ ရှိတော့တယ် ပြောတာနဲ့ couple seat ကြီးမှာ ကြည့်ခဲ့ရတယ်။
“ရုပ်ရှင်မပြခင် ၄၅ မိနစ် ကြိုတင်လာပါ၊ တမိနစ် နောက်ကျတာနဲ့ ဘွတ်ကင် ကန်ဆယ် လုပ်ပါမယ်” ဆိုလို့ လန့်ဖျန့်ပြီး ၁၀ နာရီ ပြမယ့် ရုပ်ရှင်ကို ၈ နာရီ ၂၀ လောက်ကတည်းက အိမ်က ထွက်ရတယ်။ Junction Square ကို ရောက်တော့ ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ် ။ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် အပြင်မှာ ထိုင်စောင့်ပြီး ၉ နာရီ တံခါးဖွင့်ဖွင့်ချင်း အထဲဝင် လက်မှတ်ဖြတ်၊ တော်ပါသေးရဲ့ အချိန်မီလို့။
သိပ်ကောင်းမယ် မျှော်လင့်ထားပြီးမှ ကိုယ်ထင်သလို မဟုတ်ရင် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရမှာစိုးလို့ အရမ်းကြီး မျှော်လင့် မထားပါဘူး။ မင်းသား ဇဏ်ခီကလည်း ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ရုပ်မျိုးမဟုတ်လို့ တခီခီ နဲ့ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာမှု မြန်မာဟန် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မြန်မာ့ရှုခင်းတွေ ပါတယ်၊ ရိုက်ကူးပုံ အဆင့်မြင့်တယ် ဆိုတာနဲ့တင် သွားကြည့်ရတာ တန်တယ်လို့ သဘောထားမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့သာ ရုပ်ရှင်ရုံဆီ ရောက်ခဲ့တယ်။
မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ … Mudra’s calling ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ မသိခဲ့ဘူး၊ ခရစ်စတီးနားရဲ့ အင်တာဗျူးလည်း မကြည့်ရသေးဘူး။ မုဒြာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို နဂိုကတည်းက သိထားတာ … မြတ်စွာဘုရား ဆင်းတုတော်တွေမှာ လက်ရဲ့ အနေအထားလို့ အကြမ်းမျဉ်း သိထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား နာမည်က မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ ဆိုတော့ ဘာလဲပေါ့။ စိတ်ထဲမှာ ဇဝေဇဝါနဲ့ စကြည့်ခဲ့ရတယ်။
သရုပ်ဆောင်နေတာနဲ့ လုံးဝမတူဘဲ ပုံမှန် အပြင်မှာ ပြောဆို လုပ်ကိုင်နေသလို သက်သောင့် သက်သာရှိလှတယ်။ ဇဏ်​ခီ မဟုတ်​​တော့ဘူး၊ ​ဂျေဒန်​ ဖြစ်​သွားတယ်​။ စကားပြောစရာ မလိုရင် အပိုတွေမပြောဘဲ မျက်လုံးနဲ့ အဓိက သရုပ်ဆောင်တယ်။ အင်တာနက် စောင့်ရတာ စိတ်မရှည်ပုံကို လက်နဲ့ သရုပ်ဆောင်သွားတာ။ eye to eye contact ရှိတယ်​၊ ​ကျောကြီး​တွေ ခိုင်းပြီး မ​ပြောကြဘူး။ သူ့ အဝတ်အစားကလည်း အပျံစားတွေ မဟုတ်ဘူး သာမန်ပဲ၊ ပြောတာ ဆိုတာရော … သိကျွမ်းပြီးသား လူနှစ်ယောက် တယောက်နဲ့ တယောက် တွေ့ချိန်မှာ ဟိုင်းတွေ ဟဲလိုတွေ ဟောင်းအာယူတွေနဲ့ စပြီး နှုတ်မဆက်ဘဲ “ဟေး” လို့ စပြောတာကိုလည်း သဘောကျမိတယ်။ အပြင်မှာအတိုင်းပဲ။
သူလည်း ရုပ်အချောကြီး မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ သွယ်သွယ်လျလျနဲ့ ပြေပြစ်တယ်။ အက ညက်​​ညောတယ်​။ လွန်ကဲတဲ့ ခြယ်သမှုတွေ မပါဘဲ သာမန်ထသွားထလာ ပြင်ပုံလောက်ပဲ။ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမှာလည်း ညအိပ်ဝတ်၊ အပြင်ဝတ် ကွဲကွဲပြားပြားရှိတယ်။ ညဝတ်အင်္ကျီ night dress တွေ ဘာတွေ ဝတ်တာကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ အိပ်ရာထဲမှာ သာမန် တပတ်နွမ်း ဘလောက်စ် အင်္ကျီလေးနဲ့သာ။ သူလည်း စကားအပိုတွေ အများကြီး မပြောဘဲ မျက်နှာအမူအရာနဲ့ သရုပ်ဆောင်သွားတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ပြောတဲ့ လေယူလေသိမ်းလဲ မြန်မာတယောက် အင်္ဂလိပ်လို ပြောသလိုပါပဲ။
အားလုံး သူ့နေရာနဲ့ သူ အံဝင်ခွင်ကျမှု ရှိပါတယ်။ မင်းသမီး သူငယ်ချင်းလုပ်တဲ့ ဇာတ်ပို့မိန်းကလေးလည်း သူ့အခန်း တခါတလေ ပျောက်နေတတ်ပေမဲ့ သူပါတဲ့ အခန်းမှာ ကာရိုက်တာဝင်အောင် သရုပ်ဆောင် သွားတယ်။ လေယူလေသိမ်း၊ ပြင်ဆင်ခြယ်သမှု အဝတ်အစား အားလုံး သဘာဝကျကျပဲ။
တခြား ဇာတ်ပို့တွေလည်း အပြစ်ပြောရလောက်အောင် ဘာမှ သိပ်မရှိပါဘူး။ ဆေးဆရာကြီး အင်္ဂလိပ်လို ပြောတာလည်း သိပ်တော့ မထူးဆန်းပါဘူး၊ နယ်ဘက်တွေမှာလည်း အင်္ဂလိပ်ခေတ်က အင်္ဂလိပ် ကျောင်းထွက်တွေ၊ အင်္ဂလိပ်တွေဆီမှာ အမှုထမ်းခဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိတာပဲ။ ရှမ်းကြီး ဦးစိုင်း ... စကားများများ မ​ပြောဘူး၊ ဒါ​ပေမဲ့ သိပ်​​ကောင်းတယ်​။
အပိုပြကွက်ရယ်လို့ တခုမှ မမြင်မိဘူး။ ချက်ကော့ဖ်ရဲ့ သေနတ်ဥပမာနဲ့ပဲ ထပ်ပြီး တင်စားရဦးမယ်။ ကြည့်ကြည့်ချင်း ဒါတွေဘာလို့ ပြနေတာလဲ မသိဘူး လို့ ထင်ခဲ့မိတာတွေက နောက်ပိုင်းမှာ အကုန် ပြန်ဖြည်သွားတာ။ ဘာတွေလည်းဆိုတာကိုတော့ ထည့်မရေးတော့ပါဘူး။ ရုံမှာ သွားကြည့်ပါနော်။
မထင်မှတ်တဲ့ အချိုးအကွေ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ထည့်ထားပေမဲ့ အတင်းဇွတ်ဖန်တီးထားတာနဲ့ မတူဘူး။
အပြောများတဲ့ ဆေးကုတဲ့အခန်း၊ သစ္စာဆိုပြီးကုတယ်၊ စိတ်စွမ်းအားနဲ့ ကုတယ်၊ ဘုရားကု ကုတယ်ဆိုတာတွေ ကိုယ်တိုင်တွေ့ဖူး ကြုံဖူးတာမို့ ဒါဟာလည်း မဆန်းပါဘူး။
နှစ်သက်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း -
အများကြီးရှိပေမဲ့ နည်းနည်းပဲ ပြောမှာပါ။
သုဝဏ္ဏသာမဇာတ်တော်ကို ရှင်းပြတဲ့ စကားသံနောက်ခံကို ရုပ်သေးရုပ်လေးတွေနဲ့ သရုပ်ဖော်သွားတဲ့​နေရာ။ ဇာတ်တော်တခုလုံးကို ဘာကြောင့်ပြောနေတာလဲ ဆိုတာ နောက်တော့ ရှင်းသွားတယ်။
ဟိုတယ်အခန်းပေါက်ဝမှာ စကားပြောကြတဲ့အခန်း၊ ဂျေဒန်က ခေါင်းစုတ်ဖွားလေးနဲ့၊ နှင်းကလည်း အိမ်နေရင်း ဘလောက်စ်အင်္ကျီလေး ချည်လုံချည်လေးနဲ့၊ လုံချည်လေး ဝတ်ထားတာ အရမ်း သပ်ရပ် မနေဘဲ နည်းနည်းလေးတောင် စွန်တောင်ဆွဲ နေသေးတယ်။
ဦးပိန်တံတားပေါ်က ညရှုခင်း … နှင်းရဲ့ ဆံခြည်မျှင်လေးတွေ … အမှောင်ထဲမှာ လက်နေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေ၊ ညရဲ့ အေးချမ်းမှုနဲ့ လူသူကင်းရှင်းမှုကြောင့် ထိမ်းချုပ်မှု လွတ်ထွက်သွားတဲ့ ဂျေဒန်၊ မြန်မာ မိန်းကလေး တယောက် ပီသစွာ ဂျေဒန်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းဆန်လိုက်တဲ့ နှင်း … ။
​ရေခွက်ကို ကိုင်ထားတဲ့ ဂျေဒန့်လက်တွေ၊ စိတ်​ပူ​နေတဲ့ မျက်​လုံး​တွေ၊ လုပ်​ကို လုပ်​ရ​တော့မယ်​လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ မျက်​နှာ၊ အမှန်တရား (သစ္စာစကား) ကို ပြောနေတဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံ … ။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင် ငိုလေ့မရှိဘူး၊ အသည်းမာပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကား ကြည့်ရင်း တနေရာ အရောက် မျက်ရည် ချူတဲ့ ပြကွက် မဟုတ်ဘဲ ရင်ထဲ ဆို့သွားတယ်။ မျက်ရည်ကျလုလု၊ ဘေးနားက သူငယ်ချင်းက တရှုံ့ရှုံ့ ငိုနေပြီ။ (အဲဒီနေရာကိုတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင် တွေ့မှာမို့ ဘယ်နေရာဆိုတာ မရေးတော့ပါဘူး)
အားလုံးခြုံပြောရရင် အရုပ် အသံ အလင်း အမှောင် အခန်းအကူးအပြောင်း အားလုံး သဘောကျတယ်။ တချို့အခန်းတွေမှာ ကင်မရာက မငြိမ်ဘူးလို့ ထင်ရပေမဲ့ လှုပ်ရှားနေတဲ့ စိတ်ကို ပြချင်လို့ တမင်များ လှုပ်ထားတာလို့ ထင်ပါတယ်။
မုဒြာ ဆိုတာ …
ဇာတ်ကားကြည့်ပြီးတဲ့အထိ မုဒြာရဲ့ခေါ်သံလို့ ဘာကြောင့် အမည်ပေးသလဲ မသိသေးဘူး။ မုဒြာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ ရှာကြည့်တယ်။ ဝီကီမှာတော့ A mudra (Sanskrit “seal, mark, gesture) isasymbolic or ritual gesture in Hinduism and Buddhism လို့ ရေးထားတယ်။ မြန်မာလို တနေရာမှာတော့ မုဒြာဆိုတာ သက္ကဋဘာသာစကား ဖြစ်ပြီး အလွန်နက်နဲသိမ်မွေ့၍ အတွင်းငုပ်သော အနက်အဓိပ္ပါယ် သဘောတရားများလို့ ရေးထားပါတယ်။
ဇာတ်ကားကြည့်ပြီးမှ ကြည့်လိုက်ရတဲ့ အင်တာဗျူး တခုမှာ ဒါရိုက်တာ ခရစ်စတီနား ​ပြောထားတာကတော့ မုဒြာဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ လက်ဟန်အနေအထား၊ ပြောမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်၊ မြန်မာပြည်က ဂျေဒန့်ကို ပြန်​ခေါ်တဲ့ အသံ လို့ ပြောသွားပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ မုဒြာရဲ့ ခေါ်သံ ဆိုတာ …
"ခိုင်ကျည်မြဲမြံတဲ့ သစ္စာတရား နဲ့ သိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတို့ရဲ့ ခေါ်သံ" လို့သာ သတ်မှတ်ချင်ပါတော့တယ်။
Posted by မေဓာဝီ at 8:07 AM0comments
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လဆန်းကစပြီး ကျမတို့ရဲ့ ကျောင်းလေးမှာ နွေရာသီ သင်တန်းတွေ ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမ စင်​ကာပူက ပြန်​လာပြီး ​နေမ​ကောင်းသေးလို့ ချက်​ချင်း စာမသင်​နိုင်​ဘဲ နားလိုက်​ရတာ တနင်္လာ​နေ့ကမှ စာသင်​ခန်းထဲ ပြန်​ဝင်​ဖြစ်​ပါတယ်​။
​ကျောင်းသား အ​ဟောင်းရော အသစ်​​ရော ပါတာမို့ ​စစချင်း အချိန်​မှာ သူတို့နဲ့ မိတ်​ဆက်​စကား​တွေ ပြီးနောက် အခုလို ​ပြောရတယ်​။
"သားတို့ သမီးတို့​တွေ ပြီးခဲ့တဲ့ စာသင်​နှစ်​တနှစ်​လုံး ဝန်​ထုတ်​ဝန်​ပိုးကြီး ​ခေါင်း​ပေါ် ​ကျော​ပေါ် ထမ်းလာခဲ့ရတာ အခု ​နွေ​ကျောင်းပိတ်​မှာ ဝန်​မပိ​စေဘဲ ​ပေါ့​ပေါ့ပါးပါး ​ဆော့ကစားရင်း Activities ​လေး​တွေ လုပ်​ရင်း စာသင်​ကြမယ်​" ဆို​တော့ သူတို့လေးတွေ ​ပျော်​သွားကြတာ​ပေါ့။
"ပြီး​တော့ အင်္ဂလိပ်​စာ4skills သင်​မယ်​ ဆို​ပေမဲ့ ​နောက်​ထပ်​ skill တခုကိုပါ ထည့်​ပြီးသင်​​ပေးပါမယ်​၊ အဲဒါက​တော့ thinking skill ပါ။ critical and creative thinking ကို ကျွမ်းဝင်​ ရင်းနှီးလာ​အောင်​ လုပ်​ကြရ​အောင်​၊ ကြက်​တူ​ရွေး စာအံသင်​တဲ့ စံနစ်​ကို ​တော်​လှန်​ကြမယ်၊ ဘယ်​လိုလဲ"
အဲဒီလို​ပြောပြီး ဆရာ​အော်​ပီကျယ်​​ပြောတဲ့ My father name is U Mya. ဇာတ်​လမ်းကို ပြောပြတော့ သူတို့တွေ သဘောတကျ ရယ်မောကြတယ်။ စာသင်​တိုင်း အက်ဆေးကို အလွတ်မကျက်ဖို့ ကျမ အမြဲပြောခဲ့တာမို့ မနှစ်​က တက်​ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျောင်းသား​ဟောင်း တ​ယောက်​က ထပြောတယ်။
"တီချာ​ပြော​လို့ အက်​​ဆေးကို အလွတ်​မကျက်​ဘဲ ​ဖြေလိုက်​တာ သား B ပဲရတယ်​"
“Congratulations သား၊ သားအဲဒီလို သတ္တိရှိတာ တီချာ ဂုဏ်ယူတယ်၊ A မရတော့ ဘာဖြစ်လဲ၊ B ရတာ ဝမ်းနည်းစရာ မဟုတ်ဘူး၊ သား စာမေးပွဲ ကျတာမှ မဟုတ်တာ”
“သူများတွေ A ရတော့ A လိုချင်တာပေါ့”
“အိုကေ၊ ဒါဆို ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုရှိတယ်၊ ကိုယ့်ဘာသာ ဆုံးဖြတ်လေ၊ အခုလတ်တလော A ရတာကို ရွေးပြီး တသက်လုံး ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ဘောင်ခတ်ထားမလား၊ ဒါမှမဟုတ် အမှတ် ဘယ်လောက် ရရ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ် ရေးသားမလား၊ ကိုယ့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုပဲ ...
“တီချာတို့ ငယ်ငယ်ကလည်း အလွတ်ကျက်ခဲ့ ကြပါတယ်၊ တက္ကသိုလ် ရောက်တော့လည်း ကျူတိုရီယာယ်တွေ၊ အဆိုင်းမန့်တွေ ဆိုရင် ကူးချကြတာပဲ၊ အဲဒီတော့ နိုင်ငံခြားမှာလည်း ကျောင်းသွားတက်ရော စာတပုဒ်ကို ကိုယ်တိုင် မရေးနိုင်တော့ဘူး၊ ဘယ်လို စရေးရမှန်း မသိလို့ အင်မတန် ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်၊ တီချာက ကိုယ်ဖြစ်သလို သားတို့သမီးတို့ကို မဖြစ်စေချင်လို့ ပြောနေရတာပါ”
သူတိုရဲ့ ကိုယ်​ နှုတ်​ အမူအရာ ယဉ်​​ကျေးမှုနဲ့ ပတ်​သက်​ပြီး mutual respect ရှိဖို့ အရင်​​ပြောရပြီး ဆဲ​ရေး တိုင်းထွာတာကို နှုတ်​အားဖြင့်​ လုပ်​ရင်​ ...
"သားတို့က သူများမခံချင်​အောင်​ ဆဲလိုက်​တာပဲ၊ သူ့ကို နာ​အောင်​ ဆဲတယ်​ ဆိုတာ ကိုယ့်​ပါးစပ်​ထဲ အဲဒီအဆဲ စကားလုံးကြီး အရင်​ ထည့်​ရတာ​နော်​၊ စဉ်းစားကြည့်​ သူများ ​ညစ်​ပေသွား​အောင်​ အီအီး​တွေ ပါးစပ်​နဲ့ ငုံပြီး ​ထွေးလိုက်​တာနဲ့ မတူဘူးလား၊ သူ မ​ပေခင်​ ကိုယ်​က အရင်​ ငုံလိုက်​ရတာ​နော်​"
ဆိုပြီး​ပြော​တော့ အီး အား နဲ့ ရွံပြကြတယ်​။ ခု​ခေတ်​မှာ ထမင်းစား ​ရေ​သောက်​ အလယ်​တကူ ဆဲ​ရေး တိုင်းထွာ ​နေကြတယ်​၊ ဘာသာ​ရေး ရှု​ထောင့်​က ကြည့်​ရင်​လည်း ဘယ်​ဘာသာကမှ ဆဲတာကို အားမ​ပေးဘူး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဆိုလည်း ဆဲတာဟာ ဝစီဒုစရိုက်​ပဲ၊ ဒုစရိုက်​သမား ဖြစ်​ချင်​ကြသလား"
"မဖြစ်​ချင်​ပါဘူး" ပြိုင်​တူ ​ပြောကြတာ​ပေါ့။ :)
ဒါနဲ့ ဆက်​ပြီး အနိုင်​မကျင့်​ဖို့၊ ခွဲခြား ဆက်​ဆံခြင်း မလုပ်​ဖို့ ​တွေ ​ပြောရတယ်​။ ​နောက်​ဆုံး​တော့ "ကိုယ်​ကြိုက်​တာ ကိုယ်​လုပ်​ကြပါ" ... လို့ ​ပြောပြီး နိဂုံးချုပ်​လိုက်​တယ်​။ ကိုယ်​ မကြိုက်​တဲ့ အပြုအမူ အ​ပြောအဆိုကို မလုပ်​ဘဲ ကိုယ်​ ကြိုက်​တဲ့ ... (ကိုယ့်​ကို ဆက်​ဆံ​စေချင်​တဲ့) အပြုအမူ အ​ပြောအဆိုကိုသာ လုပ်​ပါ လို့​ပေါ့။ ဒါဟာ ကိုယ်​ချင်းစာ တရားပဲ မဟုတ်​လား။
ဒီနှစ်နွေသင်တန်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာအပြင် သင်္ချာပါ ထည့်သင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုခေတ် ကလေးတွေ သင်္ချာညံ့တယ်လို့ ပြောကြတာကို ကျမ မခံနိုင်ဘူး။ ကျောင်းသားတယောက်ယောက် သင်္ချာကြောက်တယ် ဆိုရင် ကျမ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ ကျမတို့ ငယ်ငယ်က သင်္ချာဆိုရင် ပျော်နေခဲ့တာ၊ သူတို့လည်း သင်္ချာကို ပျော်ပျော်ကြီး သင်စေချင်တယ်။
သင်္ချာချိန်မှာ အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး သင်ပေးရတယ်။ ကျမ သင်ရတဲ့ အပိုင်းက shape တို့ length တို့ ဆိုတော့ စာသင်ခန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ shape တွေကို မေးရင်း ဖြေရင်း လိုက်ရှာကြရင်း အငြိမ်မနေရသလို length ဆိုလည်း ဖတ်စာအုပ်တွေ လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်တွေ၊ ခဲတံ၊ ခဲဖျက်၊ ကွန်ပါဘူးတွေ ကို ပေတံ တချောင်းနဲ့ လိုက်တိုင်းခိုင်း၊ နောက် စားပွဲ ကုလားထိုင် ဝှိုက်ဘုတ် မာ့ကာပါမကျန် ပျော်ပြီး အကုန် တိုင်းကြတော့တာပဲ။
တိုင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံ အတော်လေး ရတော့မှ ပစ္စည်းတခုကို မတိုင်းခင် ခန့်မှန်းခိုင်း၊ more than - less than တွေ ပြောခိုင်း ... အဲဒီလိုနဲ့ သူတို့လည်း မော ကိုယ်လည်း မောတဲ့အချိန်ကျတော့ ကျောင်းဆင်းခေါင်းလောင်း ထိုးရော .... ။
ကျမတို့ရဲ့ အဓိက ဦးတည်ချက်ကတော့ ကလေးတွေ နွေရာသီမှာ စိတ်ဖိစီးမှု မရှိစေဘဲ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ ဆော့ကစားရင်း သိသင့် သိထိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေ သင်ယူနိုင်ဖို့ပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ စာသင်​နှစ်​ တနှစ်လုံး ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေနဲ့ စိတ်ရှုပ်ထွေးခဲ့ရတဲ့ ကလေးတွေအတွက် နွေတနွေမှာတော့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါး သင့်တယ် မဟုတ်လား ... ။
နေ့တဝက် ကလေးတွေကို စာသင်ပြီးတဲ့အခါ full time သင်တဲ့ ဆရာတွေ နေ့စဉ်​ discussion လုပ်ကြရတယ်။ ဘယ်အတန်းကို ဘယ်လိုသင်တယ်၊ ဘယ်လို သင်ရင် ပိုကောင်းမယ်၊ နောက်နေ့ ဘယ်လိုတွေ သင်ကြမယ် ဆိုတာ နေ့တိုင်း ပြောပြ ဆွေးနွေးကြ၊ အခက်အခဲတွေ ရှိရင် အတူတူ တိုင်ပင် ဖြေရှင်းကြပါတယ်။
ဒီတ​နွေမှာ​တော့ ရာသီဥတု ပူလောင်မှုကို အံတုပြီး ကံ့ကော်ရိပ်မှာ ချွေးသိပ်ရင်း ကျောင်းသားတွေရော ဆရာ ဆရာမတွေပါ ... တပျော်တပါး ... ဖြတ်​သန်းသွားကြရဦးမှာပါ။
၁၄ မတ်​ ၂၀၁၈
Posted by မေဓာဝီ at 8:21 AM0comments